एनआरएन आईसीसी अध्यक्ष शेष घलेको अमेरिका भ्रमण केकालागि हुँदैछ ? | usa एनआरएन आईसीसी अध्यक्ष शेष घलेको अमेरिका भ्रमण केकालागि हुँदैछ ? | usa
Content View Hits : 35822891
Saturday, 09 August 2014 14:46
Exclusive: 1 photo,2videos: न्यू योर्क- गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तरराश्ट्रीय समन्बय समिती (एनआरएन एआईसिसि) अध्यक्ष शेष घलेको उत्तर अमेरिका भ्रमणलाई अमेरिकावासीले निक्कै चाँसो दिएर हेरेकाछन् । अध्यक्ष घलेको अमेरिका भ्रमण अगस्ट ११ देखि २४ तारिखबीच अमेरिकाका बिभिन्न शहरहरुमा हुँदैछ । अध्यक्ष घलेसंग अगस्ट ११-१२ मा वासिङ्टन राज्यको सियाटल शहरमा, अगस्ट १३-१४ मा क्यालिफोर्निया राज्यको लस एन्जेलस शहरमा, अगस्ट १५-१६ मा मासाचुसेट्स राज्यको बोस्टन शहरमा, अगस्ट १७-१८ इलेनोई राज्यको सिकागो शहरमा, अगस्ट १९-२० टेक्सास राज्यको डालस शहरमा, अगस्ट २१-२२ मा वासिङ्टन डिसीको डिसी मेट्रो एरियामा र अगस २३-२४ मा न्यू योर्क राज्यको न्यू योर्क शहरमा बिशेष अन्तरकृयाहरु र नेपालमा एनआरएन मुख्यालय भवन निर्माणकोलागि फन्डरेजिङ डिनर रातृभोजहरुको आयोजना हुँदैछ । यसैबीच, एनआरएन भवन निर्माणकालागि अष्ट्रेलियाबाट झन्डै २ करोड रूपैयाँ अनुदान संकलन भैसकेको खबर प्राप्त भएको छ । हालसम्म उक्त भवन निर्माणकोलागि २६ करोड ७२ लाख ५ हजार २३८ रुपैयाँ संकलन भएको छ । अब अमेरिकाबाट पनि एनआरएन एआईसिसिले अमेरिकावासी नेपालीहरुबाट पनि ठूलो अपेक्षा गरेको छ।
Jamuna Gurung and Shesh Ghale came to Australia as business studies students in the early 90s and have since builtacombined wealth of $265 million. Photo: Josh Robenstone (www.brw.com.au)
एनआरएन अमेरिकाका सामु छोटो समयमा धेरै काम गर्नु पर्ने बाध्यता छ। तेही कुरालाई मध्यनजर गर्दै छिट्टोभन्दा छिट्टो ब्यापकरुपमा आम नेपाली अमेरिकनसम्म पुगेर ब्यापक सभागिता बढाउनु पर्ने छ। यसै शिल्सिलामा एनआरएनएका अध्यक्ष शेष घलेको भ्रमणलाई एनआरएन अमेरिकाले एउटा माध्यम बनाएर अमेरिकाका बिभिन्न शहरहरुमा जाने कार्यक्रम बनाएको हो । शेष घले भन्नुहुन्छ कि नेपाली अमेरिकनको ब्यापकरुपमा सभागिता बिना एनआरएनको सार्थक्ता छैन। यसपालीको अमेरिकन नेपालीहरुको एनआरएन लहरले ठुलै हल्चल ल्याएको छ। यो लहरदेखि अध्यक्ष घले खुशी हुनुहुन्छ र आगामी दिनमा एनआरएनमा झन राम्रो सहभागिता हुने आशा राख्नु हुन्छ।
अध्यक्ष शेष घलेकाबारेमा
शेष घलेको जन्म लम्जुङ जिल्लाको साधारण परिवारमा जन्म भएको हो । घलेले नेपालको पढाईपछि पूर्व सोभियत संघबाट इन्जिनियरिङ गरेर केही समय नेपालमा सरकारी काम गरेका थिए । अध्ययनकालागि पून: अस्ट्रेलिया जानुभएका घलेले अध्ययनपछि आफ्नै ब्यापार सूरु गर्नुभयो। शिक्षा, शपिङ कम्प्लेक्स, अफिस कम्प्लेक्सलगायत ब्यवसाय गर्नुहुने घले एक सफल ब्याबसायी हुनुहुन्छ । २००३ बाट एनआरएनमा सेवा सुरुगर्नु भएका घले २०१३ मा अध्यक्ष मै निर्बाचित हुनुभएको हो ।
कार्यक्रमहरु कहाँ कहाँ र के के हुँदैछन् ?
सियाटल, वासिङ्टन स्टेट
बिभिन्न संस्थासँग भेट्घाट र फन्डरेजिङ डिनरकालागि टिकेटको ब्यबस्था गरिएको छ। भरिमै परिचित प्रसिद्ध ब्याबसायी माइक्रोसफ्टका प्रमुख बिल गेट्ससँग बिशेष भेटघाट कार्यक्रम तय गरिएको छ । सेभेन समिट फाउन्डेशन र नेपाली सियाटल सोसाइटीसँग संयुक्तरुपमा सो कार्यक्रम गरिएको छ।
१३ -१४ अगस्ट
१३ अगस्टमा ओपन युनिभर्सिटीबारे छलफल-क्याल्स्टेट लङबिचमा हुने छ भने साँझ पत्रकार भेटघाट, अन्तर्कृया राखिएको छ। अन्तर्कृयामा एनआरएनबारे जानकारी, छलफल अनि डोनर्स एप्रिशिसियशन राखिएको छ र अन्तमा भब्य मनोरन्जनात्मक साँस्कृतिक कार्यक्रम हुनेछ। १४ अगस्टमा बणिज्यदूत ॠषि ढकालको घरमा लन्च र छलफल राखिएको छ। स्थानिय भेट्घाट र साझमा फन्डरेजिङ डिनर-ब्लाक टाइको आयोजना गरिएको छ।
फन्डरेजिङ कार्यक्रम तथा अन्तर्कृया हुने छ भने १६ अगस्टमा नेपाली महिला संस्था एनडब्ल्यूजिएनको कार्यक्रममा सहभागि हुनुहुने छ।
स्थानीय संस्थाको साधारण सभालाई सम्बोधन, भेट्घाट तथा अन्तर्कृया कार्यक्रमकासाथमा फन्डरेजिङ डिनर आयोजना गरिएको छ।
स्थानिय संस्थाहरुसँग संयुक्तरुपमा अन्तर्कृया कार्यक्रम, तेसैगरी फन्डरेजिङ डिनर आयोजना गरिएको छ।
डिसी मेट्रो एरिया
फन्डरेजिङ तथा अन्तर्कृया कार्यक्रम हुने छ भने डिनरकोलागि स्थानिय ब्याबसायीहरुले सहयोग गर्नुहुने छ। बाणिज्यदूत प्रेमराजा महतसँग बिशेष कार्यक्रम राखिएको छ।
न्यू योर्क, न्यू योर्क
न्यू योर्क शहर एनआरएन अमेरिकाको हेडक्वाटरभन्दा फरक नपर्ला। एनआरएन अमेरिकाका अध्यक्ष, दुई उपाध्यक्ष, महासचिब, सहकोषाध्क्ष र सदस्यलगायत ७ जना पदाधिकारीहरु यहि शहरकै हुनुहुन्छ।
अध्यक्ष घले अगस्ट २३ तारिख बेलुकि इ-प्लानेटले आयोजना गर्न लागेको मिस नेपाल युएसको चौंथो ग्रान्ड फिनाले कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने छ ।
अध्यक्ष घलेसंग न्यू योर्कका नेपाली समुदायका प्रतिनिधिहरुसंग अगष्ट २४ तारिख बेलुकि ७ बजेदेखि चैन फेडेरेशन हल, ४४-०१ ब्रड्वे, अस्टोरिया, न्यू योर्कमा "समुदायसंग एनआरएन अध्यक्ष" बिशेष अन्तरक्रिया तथा भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ भने त्यस पश्च्यात फन्डरेजिङ डिनर आयोजना गरिएको छ।
एनआरएन अमेरिकाका भावी कार्यक्रमहरुको रुपरेखा
एनआरएन अमेरिकाले ५० वटा राज्यमा सदस्यता बितरण सुरुगरी आगामी डिसेम्बरभन्दा अगाडिनै च्याप्टर गठनको तयारी अगाडि बडाउने भएको छ। सोकालागि पूर्ण कार्यक्रम छिट्टै आउँदै छ तर हाल चाँही सदस्यता बढाउने कार्य भईरहेको छ। १९ जना कार्यसमिती र आइसिसी मेम्बरसमेतको सहयोगमा स्टेट स्टेट भाग लगाएर कार्य गरिने छ।
उता नि:शुल्क कनुनी सेवा प्रदान गर्नकोलागि लएर्स कमिटी गठन गरिएको छ। हरेक १५ दिनमा आईतवारको दिन एकघन्टासम्म यो सेवा नि:शुल्क रुपमा सन्चालन गरिने छ। १७ जनासम्म कानुनबिदहरु हुन सकिने सो कमिटीमा हाल १० जना हुनुहुन्छ।
एक पटक नेपाली सधैंको नेपाली
नागरिकताको निरन्तरता दिनकोलागि अध्यक्ष खगेन्द्र जिसीको संयोजनमा टास्क्फोर्स गठन गरिएको छ। यसकालागि नेपालका प्रधानमन्त्री सुशिल कोईरालालाई ज्ञापन पत्रदिने र भेटने कार्य गरियो। प्रधानमन्त्री कोईरालाले सो कार्यकालागि पार्टी र सरकार दुबैमा बिशेष पहल गर्ने प्रतिबध्धता गर्नु भएको छ। त्यसैगरि एमाले पार्टिको आधिबेशनबाट पनि सो कुरा नितिगतरुपमा पास भएको छ।
महिला बिकास बिशेष कार्यक्रमलाई संस्थागत गर्नकोलागि महिला कमिटी गठन गरिएको छ। बिभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नुभएका दिग्गजहरुको सभागितासो कमिटी छिट्टै कार्यक्रम सूरु गरिने छ।
एनआरएन स्थानिय मिडिया प्रतिनिधि- एनआरएनलाई ब्यापकरुपमा जनस्तरमा लैजानकोलागि मिडिया पार्ट्नरहरुको भूमिकालाई अति महत्व राख्दै मिडिया कोअर्डिनेटरको सम्योजनमा एनआरएन मिडिया पार्ट्नरहरुको ब्याबस्था गरिएको छ।
खेल्कुद बिशेष कार्यक्रम- खेलकुद्को महत्वलाई निरन्तरता दिनकोलागि खेल्कुद कमिटिको ब्यबस्था गरिएको छ। सो कमिटिले छिट्टै बिभिन्न खेल्कुदका कार्यक्रमको आयोजना गर्ने छ।
बाइलज सम्सोधन- संस्थाको बाइलज सम्सोधन गर्नकोलागि बाइलज सम्सोधन कमिटीको गठन गरिएको छ।